Nasiana sisin-tany i Ekoatera ary niverina ny sidina
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nasiana sisin-tany i Ekoatera ary niverina ny sidina
Ny Governemanta Ekoatera dia nanambara ny fanidiana ny sisin-tany ho an'ireo mpitsangatsangana vahiny tonga rehetra, manomboka amin'ny 23:59 Alahady 15 martsa.
Mandritra izany fotoana izany, Ekoatera dia nandrara ny sidina iraisam-pirenena tsy hiditra ao amin'ny firenena ary nanidy ny seranan-tsambo ary sisintany ny niampita.
Mpandeha iray no nibitsika hoe: Tafahitsoka ao Colombia isika, tsy afaka nahazo sidina nankany Ekoatera alohan'ny hanidiana ny sisintany, telo fotsiny ny sidina ary niandry 4 ora izahay, nilazana fa tsy misy seza intsony , ka tafahitsoka eto izahay mandra-pisokafan'ny sisintany indray.
Mpamaky iray hafa nisioka hoe: Teratany kanadiana mipetraka ao aho Ekoatera amin'ny sisintany mihidy mandritra ny 30 ora. Nanana ady tany an-trano aho izay nofoanana tampoka. Ampianaro aho azafady - maniry mafy hody aho.
Amin'izao fotoana izao, i Ekoatora dia manana trangan'aretina virus 28, 2 no nanampy androany, saingy mbola tsy nisy maty tany Ekoatera tamin'ity virus ity.
Ekoatera no firenena voalohany any Amerika atsimo izay manidy ny fanidiana ny sisintany noho ny Coronavirus.
Kanada: Via Rail Update ho valin'ny COVID-19
Famaranana ny fizahan-tany any Afrika Atsimo